NLDပါတီကို ဖကျြသိမျးရနျ ကွိုတငျဆုံးဖွတျထားခွငျးမရှိဟု ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဆို | Popular
November 26, 2021 Asian Fame
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးခငျမောငျဦးက ကျောမရှငျထံ အမြိုးသားနိုငျငံရေးဒီမိုကရကျတဈပါတီက ပေးပို့လာသော အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီအား ဖကျြသိမျးရနျ အကွံပွုလှာတဈစောငျကို လကျခံရရှိထားကွောငျးလညျး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျပွောသညျ။
“ခိုငျမာတဲ့ အထောကျအထားတော့ မပါဘူး”ဟု အမြိုးသားနိုငျငံရေးဒီမိုကရကျတဈပါတီက ပေးပို့လာသောစာအပျေါ မှတျခကျြပွုသညျ။
လကျရှိတှငျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက နိုငျငံတှငျးရှိ တညျဆဲနိုငျငံရေးပါတီ ၉ ၂ပါတီရှိသညျ့အနကျ နိုငျငံရေး၃၄ပါတီကို စဈဆေးပွီးဖွဈကာ (၄) ပါတီကို စဈဆေးနဆေဲဖွဈသညျဟု ပွောသညျ။
ဆကျလကျ၍လညျး ကနျြပါတီမြားကို စဈဆေးမညျဟု ပွောသညျ။
ပွညျထောငျစုရှေးကျောကပှဲကျောမရှငျက ၎င်းငျးတို့ပွုလုပျသညျ့ အစညျးအဝေးနှငျ့ အခမျးအနားမြားသို့ နိုငျငံရေးပါတီတကျရောကျနိုငျရေးအတှကျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီကိုပါ နိုငျငံပိုငျမီဒီယာမှတဆငျ့၊ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ ဝကျဆိုဒျမှ တဆငျ့၊ပါတီ အီးမေးလျမှတဆငျ့၊စာလမျးကွောငျးမှ တဆငျ့၊ရနျကုနျတိုငျးရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲမှတဆငျ့ ဖိတျကွားခဲ့မှုရှိကွောငျးနှငျ့ အစညျးအဝေး၊အခမျးအနားမြားသို့ တကျရောကျခဲ့ခွငျးမရှိဟုလညျး ပွောဆိုခဲ့သညျ။
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့၊ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌဟောငျး ဦးလှသိနျး၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန ဝနျကွီးဟောငျး ဦးမငျးသူ၊ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျဟောငျးမြားဖွဈကွသော ဦးမွငျ့နိုငျနှငျ့ ဦးသနျးဌေး ၊ ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျ (မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး)နှငျ့ ဒေါကျတာမြိုးအောငျ (နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌဟောငျး) ပါ ၁၆ ဦး တို့ကို. ရှေးကောကျပှဲ၌ မလြျောဩဇာသုံးမှုကို ကြူးလှနျခွငျး စသညျ့ဖွဈစဉျမြားတှငျ ပါဝငျပတျသကျကြူးလှနျခဲ့ကွသညျဆိုသော စှဲခကျြမြားဖွငျ့ နိုဝငျဘာ ၁၅ရကျတှငျ တရားစှဲဆို ထားမှုရှိသညျ။
NLDပါတီကို ဖျက်သိမ်းရန် ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို ဖျက်သိမ်းရန် အစီအစဉ် ရှိ၊မရှိ ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းဌာနတစ်ခုက မေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဦးက ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဦးက ကော်မရှင်ထံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပေးပို့လာသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအား ဖျက်သိမ်းရန် အကြံပြုလွှာတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိထားကြောင်းလည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။
“ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတော့ မပါဘူး”ဟု အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပေးပို့လာသောစာအပေါ် မှတ်ချက်ပြုသည်။
လက်ရှိတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံတွင်းရှိ တည်ဆဲနိုင်ငံရေးပါတီ ၉ ၂ပါတီရှိသည့်အနက် နိုင်ငံရေး၃၄ပါတီကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကာ (၄) ပါတီကို စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ဆက်လက်၍လည်း ကျန်ပါတီများကို စစ်ဆေးမည်ဟု ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကော်ကပွဲကော်မရှင်က ၎င်းတို့ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးနှင့် အခမ်းအနားများသို့ နိုင်ငံရေးပါတီတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုပါ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှတဆင့်၊ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဝက်ဆိုဒ်မှ တဆင့်၊ပါတီ အီးမေးလ်မှတဆင့်၊စာလမ်းကြောင်းမှ တဆင့်၊ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှတဆင့် ဖိတ်ကြားခဲ့မှုရှိကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး၊အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးလှသိန်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးမင်းသူ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်နှင့် ဦးသန်းဌေး ၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း)နှင့် ဒေါက်တာမျိုးအောင် (နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟောင်း) ပါ ၁၆ ဦး တို့ကို. ရွေးကောက်ပွဲ၌ မလျော်ဩဇာသုံးမှုကို ကျူးလွန်ခြင်း စသည့်ဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်ဆိုသော စွဲချက်များဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက်တွင် တရားစွဲဆို ထားမှုရှိသည်။
ဖာပှနျခရိုငျ၏ UEC ရုံးမိုငျးဖောကျခှဲခံရ ပကျြစီးမှုမြားပွား